Puntland oo Xukuno Kala Duwan Ku Ridey Maxaabistii Al-shabaab ay ug qabeen dagaalkii dhexmarey
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Maamulka Puntland ayaa goordhaweyd Xukuno kala duwan ku ridey dhalinyaro ka Tirsanaa Xarakada Al-shabaab ee lagu hayay mudooyinkii dambe xabsiga dhexe ee Magaalada Garowe, kuwaas oo aan horey maxkamad loosoo taagin.
Xeer ilaaliyaha Maxkamada Ciidamada qalabka sida Puntland Mudane Cabdikariin Xasan Firdhiye ayaa saxaafada u sheegay goordhaweyd in la xukumay 28 dhalinyaro oo kamid ah Shabaab da’dooda u dhexeyso 18 jir iyo 15-jir, kuwaas oo lagu riday xukuno u dhexeeya 15-ilaa iyo 20-sano oo xarig ah.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha Xeer ilaaliyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida Puntland Cabdikariin Xasan Firdhiye wuxuu sheegay in qaarka soo haray oo ay da’doodu u dhaxeyso 15 ilaa iyo 10 sano jir islamarkaana tiradoodu dhan tahay 26 maxbuus in lagu xukumay dhaqan celin lagu sameyn doono.
Dhawaan Maxkamadda Darajada Kowaad ee Ciidamada Puntland ee Gobolka Sool iyo Nugaal ay xukuno dil toogasho ay ku xukuntay 43-dhalinyaro oo ku adeeysnaa in ay ahaayeeyn shabaab-kii soo weeraray xeebaha deeganada Puntland Bishii Maarso aynu soo dhaafnay.
Maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaro ka Tirsanaa Xarakada al-shabaab ee lagu qabtay dagaladii ka dhacay xeebaha deeganada Maamulkaas Bishii March ee Sanadkaan 2016-ka,waxaa sidoo kale jira eedeemo loo jeediyay maamulka oo ku aadan in xukuno dil ah uu ku ridey Caruur aan qaan gaarin.